पंप (KAMAZ) को प्रतिस्थापन - क्षति सम्पत्ति र उच्च-दबाव इन्धन पम्प गराउँछ
KAMAZ इन्जिन धेरै जटिल भागहरु र सम्मेलन छ। तर सबैभन्दा जटिल मिसिन उच्च दबाव पंप रूपमा, त्यसैले स्पेयर छ। KAMAZ आवश्यक पूरा हुन, यो पंप। पम्प सबै मोडेल मा उपलब्ध छ, अपवाद बिना छ - यो के आफ्नो परिमार्जन र क्षमता फरक छैन। यो मिसिन यसको परिष्कृत डिजाइन र कार्यक्षमता द्वारा प्रतिष्ठित छ। उहाँले बस मा अपरिहार्य छ इन्धन प्रणाली, त्यसैले यसलाई मर्मत आफैलाई यो व्यवसायीक यो काम सौंपन राम्रो छ, आवश्यक छैन। KAMAZa इन्धन पम्प (इन्धन पम्प उच्च दबाव), हुनत यो उच्च विश्वसनीयता, तर अझै पनि ढिलो वा चाँडो छ प्रत्येक वस्तु प्रतिस्थापन र मर्मत आवश्यक छ। यस लेखमा हामी एकाइ को प्रतिस्थापन आवश्यक छ कि अवस्थामा देखो हुनेछ, साथै यो कसरी कार्य सिक्न।
पम्प उपकरण (Kamaz) र यसको प्रतिस्थापन
भाग प्रतिस्थापन जो विशिष्ट ज्ञान, सीप र प्रयास आवश्यक छ एक जटिल प्राविधिक प्रक्रिया छ। पछिल्लो ठाँउ यहाँ र पंप KAMAZ को प्रतिस्थापन वा समायोजन बस असम्भव छ बिना विशेष उपकरण को उपस्थिति, छैन। यो पनि KAMAZ उच्च दबाव पंप ईंन्धन लाइन मा डिजेल इन्धन को आपूर्ति मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने टिप्पण लायक छ। यदि यो काम छैन, र इन्जिन गोठ र कार सुरु बस सम्भव हुने छैन। एक टूटना दूषित चुच्चो, धूलो र अन्य साना कणहरु को आकस्मिक इन्जेशन सुविधा। तर पानी - यो पम्प KAMAZ लागि मुख्य शत्रु हो। पंप उपकरण मा तरल पदार्थ को सम्पर्क पछि, आफ्नो काम सबै तुरुन्तै रोक्छ र मरम्मत अब पर्याप्त छन्। स्थिति बचाउन सक्ने मात्र कुरा - यो पम्प पूर्ण प्रतिस्थापन छ, यो संग पनि, बाहिर एक विशेष सेवा स्टेशन मा लगे छ।
म इन्धन सिस्टम को जीवन कसरी लम्ब्याउनु गर्न सक्नुहुन्छ?
क्रममा बस पर्याप्त सफाई वा प्रतिस्थापन समसामयिक नलिका उत्पादन गर्न इन्धन लाइनको निदान मा skimp छैन, साथै, सकेसम्म लामो समयसम्म पम्प सेवा गरे। भारी प्रदूषण को मामला मा सम्पूर्ण सफा गर्न अनिवार्य (नियम, यो निदान पछि पाइन्छ) हुनुपर्छ , इन्धन सिस्टम अन्यथा पंप KAMAZ विफलता अपरिहार्य छ।
पम्प दोष तपाईं कसरी पाउन सक्नुहुन्छ?
निस्सन्देह, पंप आफैमा तपाईं क्षति बारेमा केही नियमहरू, जो तपाईं पम्प "बाँच्न" गर्न बाँकी छ कति हेर्न सक्नुहुन्छ पालना गर्न आवश्यक त भन्नेछु, र यो निदान पठाउन समय छ कि छैन भनेर। त्यसैले जो यस एकाइ को इनकार संकेत मुख्य विशेषताहरु हेरौं:
पहिलो, चालक, यो इन्जिन शक्ति एक महत्वपूर्ण कमी छ याद। KAMAZ पहिले नै, कमजोर विशेष गरी जब यो लोडमा छ, तर यो सामान्य हुँदा, "कमजोर", यो नै इन्धन सिस्टम को एक इनकार संकेत जो "घण्टी" छ।
इन्जिन समस्या सुरु गर्दै। को ज्वलन प्रमुख जो यो निदान गर्न जाने समय भन्ने अर्थ, काम गर्न इच्छुक छैन जब इन्जिन भने।
इन्धन खपत। यो, पाठ्यक्रम, सारा कहानी - धेरै चालक अक्सर पनि KAMAZ-राम्रो यस्तो ठूलो प्रवाह लागि आलोचना (40 15 टन को एक लोड मा डिजेल को लिटर), तर मार्क पनि उच्च भएको छ भने, समस्या पंप छ भनेर थाह छ।
र अन्तिम सुविधा - यो बाट कालो धुवाँ छ निकास पाइप।
यी संकेत बुझेर तपाईं सधैं व्यावसायिक मद्दत आवश्यक छ भने, खोज्न र इन्धन सिस्टम को मरम्मत गर्दा थाहा हुनेछ।
ठूलो कार UAZ-390995 - "किसान"
कति नयाँ छत गर्छ?
एक थर्मामीटर के हो? को संक्षिप्त विवरण
कसरी म आफ्नो हातले धनुष बनाउन सक्छ
कफी निर्माता को सर्वोत्कृष्ट विकल्प